အသငျးမှာ ကစားသမားဘဝကုနျဆုံးရနျ ရညျရှယျထားပမေယျ့ စာခြုပျသကျတမျးနောကျဆုံးနှဈထဲကို ရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈကှငျးလယျလူ မိုဒရဈ – Myan Ball
ရီးရဲလျမကျဒရဈကှငျးလယျလူ မိုဒရဈဟာ ကစားသမားဘဝကို ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးမှာ အဆုံးသတျရနျ ရညျရှယျထားပမေယျ့ သူ့ဆန်ဒ အမှနျဖွဈလာမလားဆိုတာ မသခြောသေးဘူးဖွဈနပေါတယျ။ အသကျ ၃၅ နှဈအရှယျကစားသမားရဲ့ စာခြုပျသကျတမျးက လကျရှိ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးနဲ့ နောကျဆုံးနှဈထဲကို ရောကျနပွေီး ဇနျနဝါရီမှာ ဘာနဗြေူးက ထှကျခှာရနျ ဆှေးနှေးနိုငျပွီလို့ သိရပါတယျ။ ဘောလှနျးဒီအောဆု ရရှိဖူးတဲ့ ကစားသမားဟာ နညျးပွဇီဒနျးရဲ့ အသငျးမှာ ပွီးခဲ့တဲ့လတှတေုနျးက လူငယျကစားသမား ဗယျဗာဒီရဲ့ နောကျမှသာ ပှဲကစားခှငျ့ရနတော ဖွဈပါတယျ။
အသငျးမှာ အဓိက ကစားသမားအဖွဈ ကနျြရှိနသေေးသျောလညျး မိုဒရဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသငျးအတှကျ (၂၂) ပှဲပဲ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရထားပွီး ဒီရာသီမှာလညျး ခနျြပီယံလိဂျ (၃) ပှဲမှာသာ ပှဲထှကျ (၁၁) ယောကျစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့အနာဂတျဟာ မသခြောသေးဘူးဖွဈနသေျောလညျး အသငျးကနေ ထှကျခှာဖို့ စဉျးစားမှာ မဟုတျဘူးလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ပှဲထှကျကစားခှငျ့တှေ မရခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး သတငျးထောကျမြားက မိုဒရဈကို မေးမွနျးခဲ့ရာ “ ကြှနျတျောကတော့ အေးဆေးပါပဲ။ ကြှနျတျောမကစားခဲ့ရတဲ့ ပှဲတှကေ နညျးပွရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြပါ။ ကြှနျတျောကစားခှငျ့ရတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျောက အသငျးကို ကူညီပွီး အကောငျးဆုံးလုပျဖို့ ပဲ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ” လို့ ဖွသှေားခဲ့ပါတယျ။
အနာဂတျနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး “ ကြှနျတျောသနျမာနသေေးတယျလို့ ခံစားရပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ခွထေောကျထဲမှာ ဘောလုံးကို ကိုငျကစားနိုငျဆဲဖွဈပမေယျ့ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကတော့ အနာဂတျမှာပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ လူတှကေတော့ ကြှနျတေျာ့အနအေထားကို မေးခှနျးထုတျကွပမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ အေးဆေးပါ။ ကြှနျတျောကတော့ အသငျးကို အမွဲတမျးကူညီခငျြနတောပါပဲ။ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးမှာကြှနျတျောပြျောနပေါတယျ။ ဒီမှာပဲ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတျခငျြပါတယျ။ ဘယျသူကလညျး ဒီမှာ ကစားသမားဘ၀ အဆုံးမသတျခငျြသူရှိလို့လဲ? အခွအေနတှေပေျေါကို မူတညျသေးတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ ဒီမှာ ရှိနတောကို ပြျောနပေါတယျ” လို့ မိုဒရဈက ထပျပွီးပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသင်းမှာ ကစားသမားဘ၀ကုန်ဆုံးရန် ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် စာချုပ်သက်တမ်းနောက်ဆုံးနှစ်ထဲကို ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ်
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ်ဟာ ကစားသမားဘ၀ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ အဆုံးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် သူ့ဆန္ဒ အမှန်ဖြစ်လာမလားဆိုတာ မသေချာသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ကစားသမားရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းက လက်ရှိ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်ထဲကို ရောက်နေပြီး ဇန်နဝါရီမှာ ဘာနေဗျူးက ထွက်ခွာရန် ဆွေးနွေးနိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဘောလွန်းဒီအောဆု ရရှိဖူးတဲ့ ကစားသမားဟာ နည်းပြဇီဒန်းရဲ့ အသင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းက လူငယ်ကစားသမား ဗယ်ဗာဒီရဲ့ နောက်မှသာ ပွဲကစားခွင့်ရနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းမှာ အဓိက ကစားသမားအဖြစ် ကျန်ရှိနေသေးသော်လည်း မိုဒရစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသင်းအတွက် (၂၂) ပွဲပဲ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရထားပြီး ဒီရာသီမှာလည်း ချန်ပီယံလိဂ် (၃) ပွဲမှာသာ ပွဲထွက် (၁၁) ယောက်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနာဂတ်ဟာ မသေချာသေးဘူးဖြစ်နေသော်လည်း အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ပွဲထွက်ကစားခွင့်တွေ မရခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်များက မိုဒရစ်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ “ ကျွန်တော်ကတော့ အေးဆေးပါပဲ။ ကျွန်တော်မကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲတွေက နည်းပြရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ ကျွန်တော်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က အသင်းကို ကူညီပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ ပဲ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” လို့ ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။
အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း “ ကျွန်တော်သန်မာနေသေးတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်ထဲမှာ ဘောလုံးကို ကိုင်ကစားနိုင်ဆဲဖြစ်ပေမယ့် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ အနာဂတ်မှာပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ လူတွေကတော့ ကျွန်တော့်အနေအထားကို မေးခွန်းထုတ်ကြပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အေးဆေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အသင်းကို အမြဲတမ်းကူညီချင်နေတာပါပဲ။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကျွန်တော်ပျော်နေပါတယ်။ ဒီမှာပဲ ကစားသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူကလည်း ဒီမှာ ကစားသမားဘ၀ အဆုံးမသတ်ချင်သူရှိလို့လဲ? အခြေအနေတွေပေါ်ကို မူတည်သေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမှာ ရှိနေတာကို ပျော်နေပါတယ်” လို့ မိုဒရစ်က ထပ်ပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။